Iran: Miomana hihetsika mafimafy kokoa amin’ny andron’ny Quds · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Septambra 2009 19:13 GMT
Vakio amin'ny teny Français, srpski, Italiano, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, English
Mbola mihaika ny fitondrana islamika amin'ny fomba maro samihafa ihany ny hetsi-panoherana ao Iran, hatramin'ny fiantsoana ‘Allaho Akbar’ (Lehibe Andriamanitra) hatreny an-tampon-trano amin'ny alina (fifampiarahabana hatramin'ny fotoanan'ny fanoherana) mandra-pahatongan'ny fihetsiketsehana amin'ny Andron'i Quds (Jerosalema).
Ny andron'i Quds, voambolana Arabo milaza an'i Jerosalema — dia hotontosaina ny 18 septambra amin'ity taona ity. Manokana ity andro ity hanamelohana an'i Isiraely sy hanohanana ny Palestiana ny mpitondran'ny Repoblika Islamika
Saingy amin'ity taona ity kosa dia nanapa-kevitra ny hanamarika ity fotoana ity hihaikana ny fitondrana Iraniana ny hetsi-panoherana Iraniana (Hetsika Maitso) izay mbola miady hevitra ny valim-pifidianana nilazana ny filoha eo amin'ny fitondrana Mahmoud Ahmadinejad ho mpandresy tamin'ny volana jona, amin'ny fidinana an-dalambe ao Teheran sy ny tanàna hafa indray.
Indro misy lahatsary ahitana ny sarin'i Mir Hussein Mousavi, mpitarika refôrmista sady lehibe indrindra amin'ny kandidàn'ny mpanohitra, mihantona eo amin'ny tetezan'ny lalamigodànan'i Nyayesh ao Teheran, miaraka amin'ny hikam-pitolomana hoe : “Andron'i Quds, Andro maitso”.
Maro ny haiendrika sy ny sary milaza ity fotoan-dehibe ity hita amin'ny fampahalalam-baovaon'olo-tsotra an-tserasera iraniana. Asehon'ny hiaka sy ny haiendrika ny tontolom-panoherana ao amin'ny firenena.
“Tsy ho an'i Libanona na ho an'i Gaza fa ho an'i Iran no anolorako ny aiko hatao sorona”
“Andron'i Quds, firenena Iraniana Maitso mamirapiratra”
“Mitsimoka na aiza na aiza ny Maitso”
“Ny rehetra amin'ny Andron'i Quds”
Mpamaham-bolongana Iraniana NiaclNsight no manoratra:
“Ho maitso ny tsingerintaona faha-30n'ny Andro iraisam- pirenenan'i Quds (Jerosalema) amin'ity taona ity, araka ny lazain'ny vohikala refôrmista eto Iran. Efa nilaza ny handraisany anjara amin'ity andro iray toa zato fankalaza manerana ny tanànan'i Iran rehetra ity ny mpitarika ao amin'ny fanoherana na i Karroubi, na i Khatami, ary i Mousavi.”
Mehrshad indray manoratra fa [fa] “…raha tianao toherina izao toe-java-misy ankehitriny izao dia isalory ny (loko) maitso amin'ny Andron'i Quds.”